BQ Aquaris ကို C: ဝိသေသလက္ခဏာများ, နည်းပညာစာရွက်နှင့်စျေးနှုန်း | Androidsis
အာရုန်သည် Rivas | | Bq
စပိန်ကုမ္ပဏီ BQ သည် terminal အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ အကြောင်း BQ Aquaris ကို Cနိမ့်နိမ့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူစမတ်ဖုန်း။
ဤရွေ့ကားမိုဘိုင်းအနိမ့်နှင့်အလယ်အလတ်အကွာအဝေးအရည်အသွေးတွေတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ပေါင်းစပ်ဖြစ်ထွက်လှည့်။, အခြေခံစံနှုန်းအရ, Qualcomm ၏ Snapdragon 425 သည်ဖုန်းအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားများစွာပြောပြသည်။ ၎င်းတွင်လက်ဗွေဖတ်ကိရိယာ၊ NFC နည်းပညာ၊ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီနှင့်နောက်ဆုံးပေါ် Android Oreo OS လည်ပတ်မှုကဲ့သို့သောအရာများကြောင့်သင့်တင့်သောစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှာတွေ့သည်!
ဒီကိရိယာအသစ် ၅.၄၅ လက်မထောင့်ဖြတ် HD + မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည် 1.440 x 720 pixels resolution (18: 9) ဖြစ်ပြီးတစ်လက်မလျှင် ၂၉၅ pixels ရှိသည်။ အလှည့်အပြောင်းတွင်၎င်းတွင် ၁.၄ GHz ကြိမ်နှုန်းရှိသည့် Core-Qualcomm Snapdragon 295၊ RAM မှတ်ဥာဏ် 425GB၊ သိုလှောင်မှုသိုလှောင်မှုနေရာ 1.4GB - microSD မှ 2GB အထိသိုလှောင်နိုင်ပြီး 16mAh ဘက်ထရီပါရှိသည်။ အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းထောက်ခံမှုနှင့်အတူစွမ်းရည်။
စမတ်ဖုန်းတွင် 5MP Samsung sensor (Samsung S3K6L13) ကိုf/ 2.0 aperture နှင့် 1.12 μm pixel size နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤမီးခလုတ်သည် LED flash, PDAF focus နှင့်အတူ 1.080p @ 30fps resolution ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ရှေ့ဘက်တွင်f/5aperture နှင့် LED flash တို့ပါ ၀ င်သည်။ 2.0MP ကင်မရာရှိသည်။
အခြားအင်္ဂါရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း, BQ Aquaris C သည် Android 8.1 Oreo ကိုလည်ပတ်သည့်စနစ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်အနောက်ဘက်တွင်လက်ဗွေဖတ်စက်နှင့် NFC နည်းပညာတို့ပါဝင်သည်။ OS နှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီသည်၎င်းကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် အန်းဒရွိုက် 9.0 Pie အနာဂတ်မှာ
1 BQ Aquaris ကို C ဒေတာစာရွက်
BQ Aquaris ကို C ဒေတာစာရွက်
BQ AQUARIS ကို C
မျက်နှာပြင် 5.45 "2.5D HD + 1.440 x 720p (18: 9) / 295dpi / 450 nits
လုပ်ငန်းစဉ် SoC Qualcomm Snapdragon 425
အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ် 16GB microSD မှတစ်ဆင့် 256GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်
ချမ်ဘာ နောက် - 13MP (Samsung S5K3L6) aperture (f / 2.0) နှင့် LED flash ပါ ၀ င်သော1.12μm pixel အရွယ်ရှိသည်။ မျက်နှာစာ LED မီးဖြင့် 5MP (f / 2.0)
ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့်နည်းပညာနှင့်အတူ 3.000 mAh
အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန် 144.5mm x 70.9mm x 8.3mm / 150 ဂရမ်
အခြားအင်္ဂါရပ်များ နောက်လက်ဗွေဖတ်စက်။ NFC ။ 4G VoLTE Wi-Fi ကို 802.11 ခ / g / n / ac ။ Bluetooth 4.2 LE GPS + GLONASS ။ USB Type-C
BQ Aquaris C ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်သည် BQ အွန်လိုင်းစတိုး. စျေးနှုန်းကတော့ ၆.၉၉ ယူရိုဖြစ်ပါတယ် ၎င်းကို Navy Black နှင့် Silver White တွင်ရရှိနိုင်သည်။ Vodafone ကိုလည်းမကြာမီရောင်းချတော့မည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Bq » BQ Aquaris C ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ HD + display၊ Snapdragon 425, Android 8.1 Oreo နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်
သင်၏မှတ်ဉာဏ်ကိုစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောခန့်မှန်းဂိမ်းနှင့် Guess Face "Who is who" သို့လေ့ကျင့်ပါ။